Somali News 03.25.2021 | KWIT
Noocyada cusub waxaa ka mid ah mid ka mid ah noocyada kala duwan ee ka yimid Koonfur Afrika iyo shan xaaladood oo kala duwanaanshaha California ah. Waxay ku biiraan noocyada kala duwan ee Boqortooyada Midowday, oo 14 ka mid ah hadda laga helay Koonfurta Dakota. In ka badan 228,000 oo qof oo ku nool Koonfurta Dakota ayaa helay ugu yaraan hal qiyaas oo ah tallaalka COVID.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa maanta ka warbixineysa lix kale oo COVID-19 ah iyo 633 kiis oo dheeri ah oo la xaqiijiyey. In ka badan 334, 000 oo qof ayaa helay tallaalka ugu horreeya ee laba qiyaasood ee tallaalka COVID-19 ee Iowa. Degmada Woodbury, waxaa ka jiray 32 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa si dhakhso leh u beddeli doonta goobta loogu talagalay rugaheeda talaalka. Bisha Abriil, degmadu waxay ku hayn doontaa rugahaas caafimaad Siouxland Expo Center. Illaa iyo hadda, rugaha tallaalka waxaa lagu qabtay Xarunta Dhacdooyinka ee Tyson, laakiin Agaasimaha Seerayaasha iyo Madadaalada Matt Salvatore wuxuu leeyahay waxaa jira munaasabado badan oo halkaas lagu qorsheeyay laga bilaabo bisha soo socota, goobaha beddelaya oo macno samaynaya
Floyd Valley Healthcare waxay u fureysaa xarumo caafimaad oo loogu tala galay COVID-19 qofkasta oo jira 18 iyo wixii ka weyn, iyadoon loo eegin degmadiisa. Isbitaalka Le Mars ayaa warkan ku sheegay bayaan uu soo saaray khamiistii.